Ronaldo, ayaa wuxuu umuuqdaa mid dib usoo celiyay muuqaal ciyaareedkiisa fiican marka - damqo
Tuesday 12 December 2018 / 14:42
Tababaraha kooxda kubada cagta Real Madrid ee Zidane, oo wariyaasha uwaramay kadib ciyaartii ay 5-3 ay ku dhufteen dhigooda Real Betis, garoonka Betis ka dhacday ayaa si aan caadi ahayn u amaanay Ronaldo.
Kabtanka qaranka Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa wuxuu dhaliyay ciyaartaan Hal gool, kaasoo yimid daqiiqadii 65aad, waana midkiisii 10aad ee guud ahaan sanakaan hadda soconaya ee 2018.
Ronaldo, ayaa wuxuu umuuqdaa mid dib usoo celiyay muuqaal ciyaareedkiisa fiican marka loo eego bandhigiisa liitay ee bogii hore ee xagaagan wuxuuna guud ahaan leeyahay 12 gool, marka laga hadlo tartanka gooldhalinta La Liga.
Zidane, oo ka hadlayay kadib ciyaartii Betis ayaa yiri: “Ronaldo hadda aad ayuu ugu
farax-san yahay, waana caado uu leeyahay marka uu goolal dhaliyo.
“Marka, uu noo dhaliyo goolal muhiim ah, dhamaanteena waxaan nahay kuwa ku farax-san, muuqaal ciyaareedkiisa, waxaana umaleyneynaa inuu sii wadi doono bandhigiisa qurxoon,” ayuu Zidane ku daray.
“Kadib shaqo adag oo uu qabtay Ronaldo, wuxuu dib uheli bandhigiisa, mar walba wuxuu yahay midka aduunka ugu fiican, mana jirto cid shaki gelin karta tayadda uu leeyahay isaga,” ayuu hadalkiisa kusoo xiray Zidane.